ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးအောင်ပိုင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ(ရုပ်သံ) – Shwe Likes
Shwe | November 21, 2021 | Celebrity | No Comments
ဟိုယခင် အချိန်တွေတုန်းက မြန်မာဇာ တ်လမ်းေ တွမှာ အောင်မြ င်မှုတစ်ေ နရာကို ရယူထားနို င်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်တင်မ င်းသားအော င်ပို င်ကိုတော့ လူတိုင်းသိ ကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်. အော င်ပိုင်ကတော့ အနုပ ညာအရည်အ ချင်းပြည့်ဝသူ ဖြစ်တာကြောင့် ခုချိန်ထိပ ရိသ တ်တွေက မမေ့လျော့ပဲ မှတ် မိနေကြ
သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သရုပ်ဆော င်သီဟတင် စိုးနှင့်လည်းအ တွဲဖက် ညီညီသရုပ်ေ ဆာင်နိုင်ခဲ့ သူတစ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ် ၊သူဟာသ ရုပ်ဆောင် တာအရမ်း ပီပင်ပြီးတော်လှ န်ရေးဇတ် ကားများစွာပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တုန်း ကတော့ အောင်ပိုင်တစ်
ယောက်လူ ့လောက ကြီးကို နုတ်ဆက်သွားြ ပီဖြစ်သွားေ ကြာင့် အောင်ပိုင့် ကိုချစ်‌ကြတဲ့ ပရိသတ် များနဲ့ မိတ်ဆွေများလည်း ဝမ်းနည်းခဲ့ ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာေ တာ့ အောင်ပိုင့်ဇ နီးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိူချိူသန်းက ” အောင်ပိုင်ကတော့ အရက်တွေ အလွန်အကျွံ
သောက် တာကြောင့် အသဲ မကောင်းေ တာ့ဘဲ ကျောက်ကပ်ပါ ပျက်စီးပြီးေ သဆုံးသွား တာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်နော်.. သတိလစ်ပြီးေ နာက်ပိုင်း မှာတော့တစ်ခါတည်း သတိပြန်မလည်ေ တာ့ဘဲ အသက်ပါ ပါသွားတဲ့အေြ ကာင်းကိုလည်း စိတ်မေ ကာင်းစွာနဲ့
ပြောပြာခဲ့ပါေ သးတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ထော င်သက်၂၁ နှစ်မှာ အရက်သောက် တာကလွဲလို့ ကျန်တာအိ မ်ထောင်ဦးစီးပီသခဲ့ တဲ့အကြောင်းစုံကိုလ ည်း ပြောထား ပါသေး တယ်။ ပရိသတ်ြ ကီးလည်း ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ မိသားစုကိုလည်း အားပေးစကားေ လးတစ် ခုခုလောက်ရေးပေး သွားကြပါအုံးေ နာ်..
ဟိုယခင္ အခ်ိန္ေတြတုန္းက ျမန္မာဇာ တ္လမ္းေ တြမွာ ေအာင္ၿမ င္မႈတစ္ေ နရာကို ရယူထားနို င္ခဲ့တဲ့ ဖိုင္တင္မ င္းသားေအာ င္ပို င္ကိုေတာ့ လူတိုင္းသိ ၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ေနာ္. ေအာ င္ပိုင္ကေတာ့ အႏုပ ညာအရည္အ ခ်င္းျပည့္ဝသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခုခ်ိန္ထိပ ရိသ တ္ေတြက မေမ့ေလ်ာ့ပဲ မွတ္ မိေနၾက
ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. သ႐ုပ္ေဆာ င္သီဟတင္ စိုးႏွင့္လည္းအ တြဲဖက္ ညီညီသ႐ုပ္ေ ဆာင္နိုင္ခဲ့ သူတစ္ေယာက္ျ ဖစ္ပါတယ္ ၊သူဟာသ ႐ုပ္ေဆာင္ တာအရမ္း ပီပင္ၿပီးေတာ္လွ န္ေရးဇတ္ ကားမ်ားစြာပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္တုန္း ကေတာ့ ေအာင္ပိုင္တစ္
ေယာက္လူ ့ေလာက ႀကီးကို ႏုတ္ဆက္သြားျ ပီျဖစ္သြားေ ၾကာင့္ ေအာင္ပိုင့္ ကိုခ်စ္‌ၾကတဲ့ ပရိသတ္ မ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဝမ္းနည္းခဲ့ ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. ဒီေန႔ေလးမွာေ တာ့ ေအာင္ပိုင့္ဇ နီးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ိဴခ်ိဴသန္းက ” ေအာင္ပိုင္ကေတာ့ အရက္ေတြ အလြန္အကၽြံ
ေသာက္ တာေၾကာင့္ အသဲ မေကာင္းေ တာ့ဘဲ ေက်ာက္ကပ္ပါ ပ်က္စီးၿပီးေ သဆုံးသြား တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ေနာ္.. သတိလစ္ၿပီးေ နာက္ပိုင္း မွာေတာ့တစ္ခါတည္း သတိျပန္မလည္ေ တာ့ဘဲ အသက္ပါ ပါသြားတဲ့ေၾအ ကာင္းကိုလည္း စိတ္ေမ ကာင္းစြာနဲ႔
ေျပာျပာခဲ့ပါေ သးတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာ င္သက္၂၁ ႏွစ္မွာ အရက္ေသာက္ တာကလြဲလို႔ က်န္တာအိ မ္ေထာင္ဦးစီးပီသခဲ့ တဲ့အေၾကာင္းစုံကိုလ ည္း ေျပာထား ပါေသး တယ္။ ပရိသတ္ျ ကီးလည္း က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ပိုင္ရဲ့ မိသားစုကိုလည္း အားေပးစကားေ လးတစ္ ခုခုေလာက္ေရးေပး သြားၾကပါအုံးေ နာ္..
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့လေးမှာ ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ု တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာ မျက်ရည်တွေ ထိန်းချုပ်ပြီး ဆုတောင်းစကားတွေ အများကြီးမှာကြားခဲ့တဲ့ ငွေတီဦး